सम्बृद्धिको थेगो, कनिकुथी अंग्रेजी ! –अश्विनकुमार पुडासैनी - Sadrishya
Thursday, May 24, 2018 | info@sadrishya.com sadrishya2017@gmail.com
सम्बृद्धिको थेगो, कनिकुथी अंग्रेजी ! –अश्विनकुमार पुडासैनी
: 731 views
समृद्धिको छलफलमा नेपालको राम्रो पाटो भन्दा बढि नराम्रो कुराको चर्चा भयो । संसारको एक नम्बरको ‘डष्ट पोलुसन’ भएको देश । ‘जलबायु परिवर्तन’को ज्यादै नकारात्मक प्रभाव परेको देश । ‘ट्राफिक जाम’को समस्या भएको देश । ‘समाबेशीता’ नभएको देश । भारत–चीनको बीचमा रहेर पनि ‘प्रगति’ गर्न नसक्ने देश जस्ता नकारात्मक विषयहरुमा पो बहस चम्किएर चल्नथाल्यो ।
गत मंगलबार साँझ होटल हिमालय ललितपुरमा बीबीसी वल्र्ड सर्भिसले “वल्र्ड कोइसन्स” नामक कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । सहभागी अधिकांश युवा–विद्यार्थी थिए । श्रोत व्यक्ति–भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली, राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल र डकुमेन्ट्री फिल्म निर्माता सुविना श्रेष्ठ ।
बीबीसी वल्र्ड सर्भिसकी कार्यक्रम प्रस्तोताले उत्कृष्ट प्रश्न राख्ने नेपाली युवाहरुलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने अबसर प्रदान गरेकीले कार्यक्रममा त्यसै रौनक छाएको थियो । तर जब प्रश्नोत्तरको समय शुरु भयो, हलको रौनकता हराउँदै जान थाल्यो । रौनक केबल बाँकि थियो, कार्यक्रम प्रस्तोताको ताली बजाउने संकेतमा सम्पूर्ण सहभागीहरुको गड्गडाहट तालीको ।
पंतिकार, बीबीसी वल्र्ड सर्भिसको नियमीत श्रोता समेत रहेकोले यस्ता कार्यक्रमहरुमा आफ्नै भाषामा बोल्नेहरुको कमी हुँदैन भन्ने राम्रै थाहा थियो । तर त्यसदिन भने त्यो हलमा कोहि कसैले नेपाली भाषामा बोलेनन् । कनिकुथी, जबर्जस्ती अंग्रेजी नै बोले । सबैमा कमजोर भए पनि अंग्रेजीमै बोल्नुपर्छ भन्ने देखियो ।
राम्रो भन्दा नराम्रोको चर्चा
कार्यक्रममा नेपालको राम्रो पाटो भन्दा बढि नराम्रो कुराको चर्चा भयो । संसारको एक नम्बरको ‘डष्ट पोलुसन’ भएको देश । ‘जलबायु परिवर्तन’को ज्यादै नकारात्मक प्रभाव परेको देश । ‘ट्राफिक जाम’को समस्या भएको देश । ‘समाबेशीता’ नभएको देश । भारत–चीनको बीचमा रहेर पनि ‘प्रगति’ गर्न नसक्ने देश जस्ता नकारात्मक विषयहरुमा पो बहस चम्किएर चल्नथाल्यो ।
कार्यक्रम नेपालको प्रबद्र्धन गर्ने भन्दा आफ्नो तुष्टि पोख्ने फोरम जस्तो पो बन्यो । श्रोत व्यक्तिहरुले आफ्नै आँङ्गको कन्याएर छारो उडाउने हो कि होईन ? नेपालको प्रबद्र्धन गर्ने खालका प्रस्तुति हुनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यो बेग्लै बहस को विषय हो । आगामी आलेखमा चर्चा गरौंला । आज चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने समृद्ध नेपाल बनाउन नयाँ सरकारको प्राथमिकता के हुनु पर्छ भन्ने हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व कम्युनिष्ट
कार्यक्रममा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भटराईले आफु कम्युनिष्ट नभएर भूतपूर्व कम्युनिष्ट भएको खुलाशा गर्दै भने, आई एम नट अ कम्युनिष्ट नाउ, आई एम अ फर्मर कम्युनिष्ट । उनले यसो भनि रहँदा हलमा पछिल्लो हारमा पंतिmकारसँगै बसेका अंग्रजी भाषाका प्राध्यापक प्रकाश पौडेलले व्यङ्ग गरे “हि ईज नाईदर कम्युनिष्ट इन द पाष्ट, नर टु डे ।” उनले त आफूलाई हिजोको कम्युनिष्ट नामको ब्राण्ड एम्बेसडर देखाउन मात्र खोजेका हुन् ।
भट्टराईको आचरण र व्यवहार कहिल्यै कम्युनिष्ट नरहेको दाबी गर्दै प्राध्यापक पौडेलले भने, उनी हिजो कम्युनिष्ट नामको पार्टीको नेता रहेकाले आफूलाई भूतपूर्व भनेका हुन् । नेपालमा कोहि पनि कम्युनिष्ट न रहेको, न भएको मलाई लाग्छ । यहाँ केबल बामपन्थी मात्रै थिए, छन् र रहने छन् है । अहिलेका कम्युनिष्ट नामका सबै पार्टिहरु लोकतान्त्रिक बामपन्थी हुन् । त्यसैले यिनलाई प्रगतिशील लोकतन्त्रबादी भन्यो भने ठिक होला, प्राध्यापक पौडेलको दावी यही थियो ।
सम्बृद्ध नेपालको कुरा
हिजोआज हुने फोरमहरुका बहस, गोष्ठि, सेमिनार, कार्यशाला वा सामाजीक जमघटहरुमा समेत सम्बृद्ध नेपालको एउटा आइटम हुन्छ । बीबीसकी कार्यक्रमका श्रोत व्यक्तिहरुले पनि नेपालको सम्बृद्धिका कुरा बारम्बार दोहो¥याउने प्रयत्न गरे । अबको सरकारको प्राथमिकता के के हुनु पर्छ भन्नेमा आफ्ना राय पनि दिए तर सम्बृद्धि के हो ? कसको सम्बृद्धि ? कस्तो सम्बृद्धि ? भन्नेमा न श्रोतव्यक्तिहरुको प्रस्तुतिमा एकरुपता पाईयो न त स्पष्टता नै ।
देशका चुनिएका व्यक्तिहरुमा समेत अलमल र अस्पष्टता रहेकोले सम्बृद्धिको विषय र प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई सबैको साझा बुझाईमा ल्याउन लेखक, स्तम्भकार र पत्रकारहरुले निरन्तर बहसमा ल्याउनु पर्ने माग प्राध्यापक पौडेलको छ । भन्छन्, सम्बृद्धि सबैको थेगो बनेको छ । जुनसुकै विषयमा कुराकानी भयो कि सम्बृद्धि र सम्बृद्ध नेपालको कुरो आइहाल्छ ।
हिजोआज समृद्धि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ, संबिधान भन्दा पहिले शान्ति चाहियो । शान्ति चाहियो । शान्ति चाहियो । ०७३मा संविधान बनेपछि भन्न थालिएको छ, यत्र–तत्र–सर्बत्र सम्बृद्धि । सम्बृद्धि र सम्बृद्धि ।
के हो सम्बृद्धि ?
पूर्वीय मान्यता अनुसार व्यक्ति, परिवार, समुह, समाज र राष्ट्रमा आबश्यक सम्पूर्ण कुरा पर्याप्त मात्रामा हुनु र अरुका लागि पनि दिन सक्ने अबस्था रहनु हो । यसको अर्थ मानिसका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने कुराहरुको अभावरहित अबस्था हो । शारीरिक तथा मानसिक, भौतिक एवं आर्थिक, चेतना एवं मानवीय संवेदनाका पक्षहरुमा समेत पूर्णता प्राप्तिको अबस्था हो । अभाव र दरिद्रता नहुनु नै सम्बृद्धिको लक्षण हो ।
ऐश्वर्य । भरिपूर्ण । मनका इच्छा र आबश्यकता पूरा गर्न सकिने अबस्था नै समृद्धिको मानक हो । देख्न सकिने । छुन सकिने । अरुमा हस्तान्तरण गर्न वा सार्न सकिने अबस्था । मानसिक एवं आध्यात्मिक किसिमले अनुभूति गर्न सकिने अबस्थालाई नै सम्बृद्धि भनि व्याख्या गरिएको पाईन्छ ।
नेपाली बृहद शब्द कोश अनुसार सम्बृद्ध शब्दको अर्थ हुन्छ, “धनधान्य आदिले सम्पन्न, पुगीसरी आएको । उन्नतिशील, उन्नत र सम्मृद्धि भाव वा अबस्था, सम्पन्नता । उन्नति, अभ्युदय, बढि बढाउ । चाहिँदो मात्रामा धन सम्पत्ति भएको । विद्या सम्पन्न ।
अंग्रेजी शब्दकोश अनुसार प्रोस्पेरिटी भनेको सौभाग्यशाली, धन्य, आर्थिक सम्पन्नता र शारीरिक स्वस्थता भनि परिभाषित गरिएको पाईन्छ । ईस्वरीय बरदान प्राप्तिको अबस्था पनि भनिएको छ ।
विश्व बैंक र यूएनडिपि
अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, आईएमएफ र विश्व बैंकको परिसूचक अनुसार बार्षिक प्रतिव्यक्ति अमेरीकी डलर १२,२३६ आय भएको देश सम्बृद्ध देशको सूचिमा पर्दछ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अमेरीकी डलर ७५८ रहेको अबस्थामा नेपालले कम्तीमा १८ गुणा आय गरेमा मात्र विश्व बैंकको मापदण्ड अनुसारको सम्बृद्धि लक्ष हासिल गर्न सक्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम युयनडिपिले प्रत्येक बर्ष मानव विकास सुचकांक अध्ययन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्दछ । जस अनुसार क्रयशक्ति, आर्थिक विकास, बाल मृत्युदर, शिक्षा, औसत आयु र स्वास्थ्यलाई मापनको मूल आधार बनाएको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा सम्बृद्धि मापन जस्तै लाग्ने खुशीको सूचकांक ‘ह्याप्पीनेस इण्डेक्स’ तयार गर्न थालिएको छ ।
नेपाल ८९औं स्थानमा
बेलायतमा सन् २००७मा स्थापना भई संसारका विभिन्न मुलुकहरुको सम्बृद्धि मापन गर्ने संस्था लेगाटमले प्रत्येक बर्ष संसारका विभिन्न मुलुकहरुको सम्बृद्धि मापन गर्ने आधार बनाएको छ । सन् २०१७ मा १४८ देशहरुको सम्बृद्धि मापनका नौ वटा आधारहरु तय गरेको छ ।
पहिलोः आर्थिक गुणस्तर । दोस्रोः व्यवशायिक बातावरण अर्थात उद्यमशीलता । तेस्रो ः सुशासन । चौथो ः स्वास्थ । पाँचौंं ःशिक्षा । छैठौं ः राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक शान्ति एवं सुरक्षित बाताबरण । सातौं ः व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पत्ति आर्जन, उपभोग र हस्तान्तरण गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता । आठौं ः समाजिक पूँजी एवं नागरिक सहभागिता र नबौ ः प्राकृतिक बातावरण अर्थात वातावरणीय सन्तुलय ।
यिनै बुँदाका आधारमा नतिजा समेत सार्बजनिक गरिएको छ । यसैलाई ‘लेगाटम प्रोस्पेरीटि इण्डेक्स’ भनिन्छ । यसका आधारमा उच्चतम सम्बृद्धि हासिल गरेका दश देशहरुमा पहिलोः नर्वे, दोश्रोः न्युजिल्यैण्ड, तेश्रोः फिण्डलैण्ड, चौथोः स्वीजरल्यैण्ड, पाँचौः स्वीडेन, छैटौंः नेदरल्याण्ड, आठौंः क्यानडा, नवौंः अष्ट्रेलिया र दशौंः बेलायत रहेका छन् । अन्य देशहरुमा अमेरीका १८औं, चीन ९०औं, भारत १००औं र नेपाल ८९औं स्थानमा रहेका छन् । सम्बृद्धि सूचकांकको नतिजा प्रोस्पेरिटि डटकममा समेत हेर्न सकिन्छ ।
हाम्रो समाजमा सम्बृद्धिलाई सम्पन्नता पनि भनिन्छ । नेपाली जनजिब्रोमा रहेको सम्बृद्धि वा सम्पन्नतालाई सफा एवं स्वस्थ परिकार पेटभरी खान पाईयोस् । विरामीमा उपचार गर्न पाईयोस् । शिक्षामा संसारका कुरा बुझ्न पाईयोस् । आर्थिक अभाव नहोस् । दरिद्रता देख्न नपरोस् ।
आवश्यक कुरा किन्न सकियोस् । परिआए खर्च गर्न सकियोस् । अरुलाई पनि दिन सकियोस् । घर परिवारमा सबै हासीखुशी होस् । परिवार र समाजका बीच सौहार्द्रता होस् । समाजमा सबैको इज्जत प्रतिष्ठा होस् । यत्ति भए सम्बृद्धि वा सम्पन्नता भएको भनि भन्ने गरिन्छ ।
सम्बृद्धिको चर्चा गर्दै राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले भने “राष्ट्रियताको जागरण भएको । राज– नेताले नेतृत्व गरेको सरकार भएको । आर्थिक एवं उद्यमशीलताको जागरण भएको । आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनता । सन्तुलित विकास । दोषि दण्ड र असल गर्नेलाई न्याय । राजनीतिक स्थीरता । राष्ट्रिय हित र जनहितको विचार प्रवाह गर्ने सकारात्मक सोच र व्यवहार भएको राजनीतिक नेतृत्व भएको अबस्था कायम भएको देशलाई मात्र सम्बृद्ध राष्ट्र भन्न सकिने ठम्याई रहेको व्यक्त गरे ती प्राध्यापकले ।
श्रृजनशील उद्यमीको दृष्टि
श्रृजनशील पर्यटन व्यवशायी ज्योति अधिकारी सम्बृद्धिको बारेमा भन्छन्, पहिलो कुरा त हामी नेपालीहरुमा काम गर्ने संस्कार र सीपको जागरण ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि कसको विकास ? किन विकास र कस्तो विकास ? भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अघिल्लो पुस्ता असन्तुष्टिको थुप्रो मात्रै हो । कुनै न कुनै रुपमा समाज र राज्यबाट मात्रै पालिएकाहरुले सम्बृद्धिको कुरा गर्न सक्दैनन् । सम्बृद्धिको कुरा गर्नेले पहिले आफ्नै कार्यक्षेत्रको, आफ्नै ठाउँको वा गाउँको विकासबाट सम्बृद्धिको थालनी गर्नु पर्छ ।
काठमाण्डौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकजुले गरेर देखाएको धुलिखेल अस्पताल, डा.भगवान कोइरालाले गंगालालमा गरेर देखाए पौरख, कुलमान घिसिङ्गले विद्युतमा प्रमाणीत गरेको क्षमता । मीनबहादुर गुरुङ्गले भाटभटेनी चलाएर देखाएको व्यवस्थापन । यिनीहरु नै हुन्, हाम्रा कामगर्ने बहादुरहरु !
अब बाबुरामले आफ्नो गाउँमा के गरे त्यो हेरौं । विकास हेर्न बाबुरामको गाउँ जाँउ भन्न सक्ने काम गरे ? ज्योतिले प्रश्न गरे ?
हिजो भत्काउने । असन्तुष्टि देखाउने । खोट लाउने समय थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । हिजो नेवारी भाषामा पढ्न पाउँनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने पद्यरत्न तुलाधरले आफ्ना सन्तानलाई नेवारी भाषामा पढाए त ? यी सबै सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने कुरा भए ।
अब त गर्ने हो । आफ्नो घर कस्तो बनाएको छ ? गाउँ कस्तो बनाएको छ ? अबका मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मानिस त्यही बसेर गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । जस्ले क्षमता प्रदर्शन गर्नु छ, त्यहीं गरेर देखाउ ।
ज्योतिले भने, मैले नेताहरुलाई गर्ने प्रश्न र दिने सुझाव यिनै हुन् । अब तपाई लेखक, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरु पनि प्रश्न गर्नुहोस् । यस्ता विषयमा लेख लेख्नुहोस् । बहस चलाउनुहोस् । सफलताका कथाहरु लेख्नु होस् । नमूना कामको बारेमा जानकारी गराउँने अभियान नै चलाउनुहोस् । ‘अनसीन हिरो’ हरुको सफलताका कथा खोज्नुस् अनि आउँछ सम्बृद्धि । भाषणले होईन, कामले मात्र आउँछ सम्बृद्धि, उनले जोडदार ढंगल बताए !
सम्बृद्धिका प्राथमिक चरण
नेपाल र नेपालीको सम्बृद्धिको प्राथमिकता के हुन् ? ज्योति अधिकारीले फटाफट भने–
पहिलोः अधिकांश नेपालीको क्षमता विकासमा जागरण ल्याउनु पर्छ । किला ठोक्ने । ट्वाईलेट सफागर्ने । कपडा सफा सुग्घर बनाउने र अनि मात्र लगाउने । आफ्नो ओछ्यान, भान्छा, शौचालय र घर–आगँगन चिटिक्क पार्ने । पुरुष–महिला दुबैले काम गर्ने अभियान ल्याउनु पर्छ ।
देशभर सानासाना सीप सिक्ने जागरण ल्याउनुपर्छ । ड्राइभिङ्ग, प्लम्बिङ्ग, विरुवा उमार्ने, कलमी गर्ने र सार्ने, सिकर्मी–डकर्मी, पेन्टीङ्ग, पर्खाल लगाउने मान्छेको अभाव छ नेपालमा । सबै बाहिरी मान्छेले त्यस्तो काम गरिरहेका छन् । हाम्राहरु भने ढुङ्गाफोर्ने । बोक्ने । खन्ने काम मात्रै गर्छन जसको लागि मुढेबल भए पुग्छ, कुनै सिप चाहिन्न । त्यसैले देशव्यापी यी सिप सिप सिकाउनु पर्छ भन्ने जागरण अहिलेको जरुरी आवश्यकता नै हो । यसलाई ल्याऔं ।
बोट–विरुवा कसरी रोप्ने ? कसरी काँटछाट गर्ने ? कसरी कति व्यवशायिक खेतीको उत्पादन गर्ने र त्यसको विक्रीवितरण गर्ने ? यो अभियान ७५३ वटै स्थानीय निकायबाट शुरु गर्नु पर्छ । अहिल्यै । तब मात्र शुरु हुन्छ सम्बृद्ध नेपालको वास्तविक यात्रा । कक्षा ८ देखि नै विद्यार्थीहरुलाई सिकाउनु पर्छ यस्ता सिप ।
दोश्रोः कुन ठाउँमा के को विकास गर्ने हो ? प्राथमिकता र स्पष्ट वर्गीकरण गर्नु पर्छ । भनौ न, त्रिशुली उपत्यकामा केको विकास गर्ने हो ? अरुण उपत्याकामा के गर्ने हो ? दाङ्गको प्राथमिकता कहाँ पुग्यो ? पाँचथरमा के उब्जाउने हो ? रौतहटले के देखाउने हो ? तनहुँमा के भित्राउने हो ? ७५३कै बर्गीकरण र प्राथमिकता तोक्नु पर्छ ।
तेश्रोः अब कुन क्षेत्रमा, कुन भूगोलमा कस्तो पुर्वाधार हामीलाई चाहिन्छ ? सोहि अनुसारको भौतिक पुर्वाधार तयार गर्ने हो । सडक, विजुली, टेलिफोन, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्यसेवा, सुरक्षा आदिको व्यवस्था गर्ने हो । प्राथमिकताका आधारमा सडक, हवाई तथा रेल सञ्जालको विकास गर्ने हो । पहिलो काम नै प्राथमिकता निर्धारण र सोहि बमोजिमको पुर्वाधार बनाउने हो ।
चौथौः शिक्षामा व्यापक सुधार सहित सबैबालबालिकालाई अनिबार्य रुपमा एउटै गुणस्तरको विद्यालय शिक्षा दिनुपर्छ । सबै बालबालिका एकै हुन् सबैले समान गुणस्तरको विद्यालयस्तरको शिक्षा पाएनन् भने यसबाट प्रमाणीत हुन्छ–यस्तै ताल हो भने, नेपालले सम्बृद्धि हासिल गर्न दिन सकेन ।
विद्यालयपश्चात सिप सिकेर जीवनयापन गर्नसक्ने शिक्षाको अबसर दिनुपर्छ तबमात्र हामी धनी देशको लागि चौकीदार, पाले वा डट्रि, ड्यान्जर र डिफिडको काम गर्नै विदेश म्यानपावर सप्लाई गर्ने झण्झटबाट मुक्त हुन्छौं ।
पाँचौः सामाजिक सुरक्षा हो । हामीले स्वास्थ्यलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको रुपमा राख्नुपर्छ । अत्यधिक परिश्रम गर्ने कार्यसँस्कृतिको विकास गरे पछि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत स्वास्थ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ । म समाजमा सुरक्षीत छु भोलिको चिन्ता छैन भने मात्रै मान्छेले अत्याधिक श्रृजनशिलता र सिपको उपयोग गर्दछ । यस्तो विकास सम्भब हुँदैन, जहाँ सबै भविश्य अनिश्चित र त्रासदी होस् ।
छैटौं ः स्वरोजगारका अबसरहरु । यो चाहिँ उचित कार्य संस्कृति, जागरण, प्राथमिकताको निर्धारण, आबश्यक भौतिक पुर्वाधारहरुको निर्माण पश्चात स्वतहः आउने कुराहो । त्रिशुली भ्यालीलाई हरियाली बस्तीमा रुपान्तरण गर्ने । राजधानीबाट चार पाँच वटा यातायातको व्यवस्थापन गर्ने र हरियाली बस्ती बनाउँने भन्ने सरकारले निर्णय ग¥यो भने स्वतहः त्यसको लागि रोजगारीका अबसरहरु आउँछन् ।
व्यक्तिगतरुपमा त्यस विषयमा कामगर्ने उद्यमीहरु विदेश छोडेर स्वदेश फर्कन्छन् । त्यमिमात्र होईन । विदेशीहरु समेत रोजगारीको लागि नेपाल आउँने दिन त्यति टाढा हुँदैन । कतिपयलाई भ्रम छ । सरकारले रोजगारी दिने हो । त्यो होईन । सरकारले त रुल अफ ल, शान्ति सुरक्षा, आबश्यक प्राथमिकताका क्षेत्रहरु र भौतिक पुर्वाधार दिने हो । रोजगारी त कति हुन्छ र पाँच प्रतिशत होला । अत्याधिक हुँदा सात वा आठ प्रतिशत बाँकी नब्बे प्रतिशत जनता स्व रोजगारमा लाग्ने नै हो ।
पर्यटन आफैं विकास
पर्यटन व्यवसायी ज्योति अधिकारी आफुले पर्यटन व्यवसायमा खर्चेको पच्चिस बर्षे अनुभव सुनाउन थाल्छन् । नेपालको भुगोल नै यस्तो छ कि यहाँ आबश्यक कुरा आफै प्राकृतिक रुपमा बनेको छ । पर्यटन विकासको नाममा बनेका संरचनाले गर्ने खर्चले तात्विक फरक पार्दैन ।
हिजो स्वयंभु , पशुपति वौद्धनाथ बनाउनेले के सोचेका थिए होलान् ? त्यतिखेर योजना आयोग पनि थिएन । विश्व विद्यालयपनि थिएनन् । ईन्जीनियर आर्किटेक्चर पनि त थिएनन् । तर बने । अहिले हामीले त्यस्तो के गर्न सकेका छौं त ? यहि उदाहरण हेरे काफी हुन्छ । सम्बृद्धि सपनाले आउने हो । सपना अनुसार काम गर्ने हो । केही दर्शन र विज्ञता चाहिन्न । एस्एलसी पास नभएकाले पनि ल्याउन सक्छ सम्बृद्धि । त्यसको लागि चाहिन्छ केबल सपना र, निरन्तरको क्रियाशीलता ।
सुशासन र सम्बृद्धि
शिक्षा, स्वास्थ, भौतिक पुर्वाधार, व्यावसायीक कृषी, उद्यमशीलता, श्रोत परिचालन जेसुकै भने पनि सबै तहमा सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था विना सम्बृद्धि सम्भब नै छैन । डन, अपराधी, तस्कर, माफिया, विचौलिया र भ्रष्टाचार मुक्त समाजमा मात्रै सम्बृद्धि सम्भब छ । नत्र सम्बृद्धि थेगोमात्रै बन्छ । कागजका ठेली प्रबचनका सिरिजहरु थपिँदै जान्छन् ।
व्यक्तिगत सम्बृद्धि खोज्नेहरु हिजो पनि ठाउँ सरेका छन् । आज पनि तिनीहरु अबसरको खोजीमा छन् । भोलि जहाँ पनि जान सक्छन् । यही सम्बृद्धि ल्याउने भनेको शासन गर्नेहरुले हो । सपना देख्नेले हो । योजना बनाउनेले हो । विज्ञताको उपयोग गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरुले नै हो ।
May 24, 2018 नयाँ युगमा, नयाँ नामको, नयाँ पार्टी ! – कृष्णमुरारी भण्डारी
May 24, 2018 विविध कमजोरीको बावजुद २०१६ हालसम्मकै उत्कृष्ट वर्ष– ब्योर्न लोम्बर्ग
May 23, 2018 समाजवादन्मुख सत्ता- कालिदासबहादुर राउत क्षत्री
विश्व प्रजातान्त्रिक युवा महासंघको साधारणसभा नेपालमा
जुँगा पालेर भत्ता खाँदै कालीबहादुर बुढाथोकी
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु
टाटा टिगोर कार उपहार पाए सन्दिपले
Peeling Coconut for Sell
Hari & The Potter